Tun Tun's Photo Diary: Bintan, Indonesia (2 Days 1 Night) #2
Souvenir shop ပြီးတော့ ညဈေးကိုလိုက်ပို.ပါတယ်။ ညဈေးက လမ်းကြားထဲမှာဆိုတော့၊ အထဲကို လမ်းလျှောက်သွားရပါတယ်။ ညဈေးက အစားအသောက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေ များပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ပင်လယ်စာတွေ ရောင်းတာ တွေ.ရပါတယ်။
ဘာစားရမလဲ စဉ်းစားရင်းနဲ. နောက်ဆုံးတော့ ငါးကင်နဲ. ကန်ဇွန်းရွက်ကြေ်ာ နဲ. ထမင်းနဲ. စားခဲ့ပါတယ်။ စင်ကာပူ ဒေါ်လာနဲ.ပဲ ပိုက်ဆံရှင်းခဲ့တယ်။ အမှန် အင်ဒိုနီးရှား ပိုက်ဆံနဲ.ပေးရင် ပိုသက်သာမယ် ထင်တယ်။ စင်ကာပူ ပိုက်ဆံ နဲ. ပေးမယ်ဆိုတော့ ဟင်းတခွက်ကို S$5 , S$10 စသဖြင့် တွက်လို. ကောင်းအောင်ယူတော့ ဈေးပိုကြီးသွားမယ် ထင်တာပဲ။
Chendol နဲ. အချိုတည်။
ညဈေးပြီးတော့ နောက်ဆုံးတစ်နေရာဖြစ်တဲ့ Shopping Mall တစ်ခုကို လိုက်ပို.ပါတယ်။ Mall ကိုရောက်တော့ Mall က ပိတ်တောင် ပိတ်တော့မယ်။ ရောက်လက်စနဲ. မထူးဘူးဆိုပြီး ၀င်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်က shopping ထွက်ရတာ စိတ်မ၀င်စားတော့ ခဏလောက် ၀င်ကြည့်ပြီးတော့ ပြန်ထွက်လာလိုက်တယ်။
အမှန်တော့ ဒီ Night Market Tour က စိတ်ဝင်စားလို. သွားတာမဟုတ်ဘူး။ တကယ်ဘာမှ လုပ်စရာမရှိလို. အချိန်ဖြုန်းဖို. သွားတဲ့ Tour လို.ပဲပြောပါရစေ။ မဟုတ်ရင် ဟိုတယ်မှာ တညလုံး ထိုင်နေရမှာလေ။ Tour က ကျွန်တော်တည်းတဲ့ Cabana resort ထိ ပြန်ုလိုက်ပို.ပေးပါတယ်။ ဟိုတယ်ရောက်တော့ ည ၁၁နာရီလောက်တောင်ရှိနေပြီ။ မနက်ဖြန် မနက် Sunrise ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်လို. ဟိုတယ်ရောက်ရောက်ချင်း အိပ်လိုက်တယ်။
2012-May-06, Sunrise ကို မနက် ၆နာရီလောက်ထပြီး ရိုက်တယ်။ ကိုယ်တစ်ယောက်ပဲ ရှိမယ်ထင်တာ ကိုယ့်ထက် ၀ိရိယကောင်းတဲ့သူတွေက ဓါတ်ပုံတောင်ရိုက်နေကြပြီ။ ရာသီဥတုက အရမ်းမကောင်းပေမယ့် နေထွက်တာတော့ မြင်လိုက်ရတယ်။ တိမ်တွေ အုံ.မိုင်းနေတာလဲ တမျိုးလေး လှတယ်။
နေထွက်ပြီးတော့ ကမ်းခြေတစ်လျှောက် လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ ဟိုတယ်ရဲ. ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ကျောက်ဆောင်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကျောက်ဆောင်တွေ ပေါ်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ အခန်းတွေလဲရှိတယ်။ ပင်လယ်က လှိုင်းမရှိလို. ရေကအရမ်းကြည်တယ်။
ဒီအခန်းတွေက ကျောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာ ဆောက်ထားတာပါ။
ကမ်းခြေအဆုံးနားထိ လမ်းလျှောက်သွားလိုက်တာ။ ဟိုတယ်ရဲ. တစ်ဖက်မှာ တံငါ ရွာ တခုကို လှမ်းမြင်လိုက်တယ်။ ခဏနေ မနက်စာစားပြီးရင် သွားလည်ဖို. မှတ်ထားလိုက်တယ်။
ကမ်းခြေမှာ လမ်းလျှောက်လို. ပြီးတော့ မနက်စာစားဖို. အချိန်ေ၇ာက်ပြီ။ အဲ့ဒီတော့ ဟိုတယ်ကို ပြန်သွားပြီး မနက်စာစားရပါတယ်။ အပြန်လမ်းမှာလဲ ဓါတ်ပုံတွေ အများကြီး ရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါကတော့ Hotel ကကျွေးတဲ့ Breakfast ပါ။ ပေးရတဲ့ ဈေးနဲ. တန်ပါတယ်။ အစားအသောက်မဆိုးဘူး။
Breakfast စားပြီးတော့ တံငါရွာ ဘက်ကို လမ်းလျှောက်သွားပါတယ်။ ဟိုတယ်ကနေ ၁၀ မိနစ်လောက်လျှောက်ရင် ရောက်ပါတယ်။ ဟိုတယ် အနီးအနားမှာ သွားစရာဆိုလို. ဒီတနေရာပဲ တွေ.ခဲ့တယ်။
အဲဒီ တံငါရွာမှာ လာလည်တဲ့ Tourist ဆိုလို. ကိုယ်တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ အဲ့မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဒေသခံတွေက သဘောကောင်းတယ်။ နူတ်ဆက်တယ်။ ဘယ်ကလာသလဲ မေးတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်မယ် ပြောတော့ ကြည်ကြည်ဖြူ ဖြူ နဲ. အရိုက်ခံတယ်။
ကျွန်တော်စိတ်ထင် ဒီနေရာက လူတွေနေတော့ ရေတွေ ညစ်ပတ်မယ် ထင်နေတာ ပုံမှာတွေ.ရတဲ့ အတိုင်း ရေတွေက ကြည်နေတာပဲ။ ကျွန်တော်တို. မြန်မာပြည်မှာဆို ဒီလိုလူတွေ နေတဲ့ နေရာဆိုရင် အမိူက်တွေလဲ ရေထဲပစ်၊ မစင်လဲ ရေထဲမှာ စွန်.ကြလိမ့်မယ်။ ရေက ခုနက resort ကမ်းခြေက မြင်ရတဲ့ ရေလိုပဲ ကြည်နေတယ်၊ ရေအောက်မှာ ရှိတာတွေ အကုန်မြင်ရတယ်။
ရေအောက်မှာ ငါးလေးတွေ အပြုံလိုက် တွေ.ရတယ်။ ဒီငါးတွေ စားလို.ရလားလို. မေးကြည့်တော့ မစား ကြဖူးလို. ပြောတယ်။
တံငါ ရွာကိုရောက်နေတုန်း မှတ်မှတ်ရရ နေအရမ်းပူတယ်။ ဒါကြောင့် ခဏပဲ နေပြီး ဟိုတယ်ဘက်ကို ပြန်လာခဲ့တယ်။ စင်ကာပူကို ညနေ ၃နာရီ Ferry နဲ.မှ ပြန်မှာဆိုတော့ အချိန်တွေ ပိုနေပြန်တယ်။ ဒီလိုမှန်းသိရင် စင်ကာပူကို စောစောပြန်တဲ့ Ferry နဲ. Booking လုပ်လိုက်တယ်။ ဒီတော့ ဟိုတယ်ပြန်ပြီး ထိုင်နေရုံပဲ ရှိတော့တယ်။
ဒီအန်တီကြီးက အပေါ်ဝတ်တောင် ချွတ်ပြီးတော့ နေပူဆာ လူံနေလိုက်သေးတယ်။း)
ရေ အရမ်းကြည်တော့ ကမ်းခြေမှာ အခုလို ငါးတွေ သွားနေတာ မြင်ရတယ်။
ဟိုတယ်မှာပဲ S$5 တန် နေ.လည်စာ မှာစားလိုက်တယ်။ ပူတော့ ဘယ်မှလဲ မသွားချင်တော့ဘူး။
ပူပြီးတော့ မကြာပါဘူး။ မိုးရွာပါတယ်။ မိုးကတော်တော်လေးကို သည်းတယ်။ အပြန်ကိုလဲ Ferry Terminal ကို ဟိုတယ်ကနေပို.ပေးမှာပါ။ ဒီတော့ Checkout လုပ်ပြီးတော့ ကားထွက်မည့် အချိန်ကိုပဲ ထိုင်စောင့်နေခဲ့တယ်။
စင်ကာပူကို သွားမည့် ခရီးသည်တွေ Ferry Terminal မှာ စောင့်နေတာပါ။ အပြန်ကျတော့ လှိုင်းကြီးလို.ထင်တယ် Ferry က နိမ့်လိုက် မြင့်လိုက်နဲ. စီးခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် Ferry က ကြီးတော့ သိပ်ပြီးတော့ ကြောက်စရာတော့ မကောင်းပါဘူး။
Bintan ကို ကျွန်တော် Batam ထက်ပိုပြီးသဘောကျတယ်။ ပိုပြီးတော့ Resort ပုံစံမျိုးပေါက်တယ်။ Batam ကတော့ အစားသောက်တွေ၊ shopping စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေနဲ. ပိုကိုက်တယ်။ Bintan ကတော့ အေးအေးဆေးဆေး နေချင်တဲ့ သူတွေနဲ. ပိုကိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ စင်ကာပူမှာ နေ.တိုင်း လူတွေ အများကြီးတွေ.နေရတော့ အခုလို အေးအေးဆေးဆေး သီးခြားဖြစ်နေတဲ့ Bintan ကျွန်းမှာ လာလည်ရတာပိုပြီး အပန်းပြေတယ်လို. ခံစားရတယ်။ Bintan ကျွန်းမှာ တခြား resort အကောင်းစား တွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ အခုကျွန်တော်တည်းတဲ့ Cabana resort ကတော့ Budget resort လောက်ပါပဲရှိပါတယ်။ Bintan ခရီးစဉ်ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။
စာလာဖတ်တဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ခရီးစဉ်တွေလဲ တင်စရာ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။း)
at 1/03/2016 11:55:00 PM